Ukuthi isifo sikashukela sibukeka kanjani: izithombe nezimpawu > Isifo sikashukela
Isifo sikashukela sinjani?
Isifo sikashukela sohlobo lwakwa-Type I sivame ukutholakala ezigulini ezincane ezingaphansi kweminyaka engama-30. Ukwephulwa kokuhlanganiswa kwe-insulin ngenxa yokulimala kwamanyikwe emvelo ye-autoimmune kanye nokubhujiswa kwamaseli akhiqiza i-insulin.
Ezigulini eziningi, isifo sikashukela sikhula ngemuva kokutheleleka ngegciwane (ama-mumps, i-rubella, i-hepatitis yegciwane) noma imiphumela enobuthi (ama-nitrosamines, ama-pesticides, izidakamizwa, njll.), Impendulo yokuzivikela yomzimba ebangela ukufa kwamaseli we-pancreatic.
Isifo sikashukela sikhula uma kungaphezu kwama-80% amaseli akhiqiza i-insulin. Ukuba yisifo se-autoimmune, uhlobo I lwesifo sikashukela esivame ukuhlanganiswa nezinye izinqubo zemvelaphi ye-autoimmune: i-thyrotooticosis, isabalalisa ubuthi obunobuthi, njll.
Kuhlobo II sikashukela mellitus, ukumelana ne-insulin kwezicubu kukhula, i.e. ukunganakwa kwe-insulin. Kulokhu, okuqukethwe yi-insulin esegazini kungaba yinto evamile noma ephezulu, nokho, amangqamuzana nawo awazivikeli kuwo.
Iziguli eziningi (85%) zine-Type II sikashukela mellitus. Uma isiguli sikhuluphele, ukusongela izicubu kwe-insulin kuvinjelwe izicubu ze-adipose.
Uhlobo lwe-II II yesifo sikashukela sitholakala kalula ezigulini esezikhulile ezinokwehla kokubekezelela kwe-glucose ngeminyaka.
Isifo sikashukela mellitus: izimpawu nezimpawu
Isibonakaliso sokuqala lesi sifo singakhula kakhulu inqubo yokupholisa amanxeba amancane kakhulu. Amathumba nezinduna ku-mellitus yesifo sikashukela (isithombe 2) nazo ziyizimpawu zokuqala zenkinga ngamanyikwe.
I-ukulunywa kwesifo sikashukela i-mellitus kwenzeka emaphesenti angama-80. Lesi sifo sikhonjiswa ngokwanda kwe-pigmentation yezikhumba zakho kanye nokuvela kwama warts amancane asizungezile (i-acanthosis).
Futhi ukuqubuka kwesikhumba okunjalo ngesifo sikashukela i-mellitus (isithombe ku-gal), njenge-pemphigus yesifo sikashukela, kukhombisa isikhumba esijulile sesikhumba futhi kudinga ukungenelela okuhlinza.
Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sikhula ngokushesha, thayipha isifo sikashukela sesi-II kancane kancane. Imvamisa kuba khona inkambo yamuva yesifo sikashukela, futhi ukutholwa kwayo kwenzeka ngengozi lapho kuhlolisiswa i-fundus noma i-laboratri yeshukela egazini nomchamo. Ngokwezempilo, thayipha mina bese ngibhala isifo sikashukela i-II mellitus sizibonakalisa ngokwehlukile, kepha izimpawu ezilandelayo zivamile kuzo:
ukoma nomlomo owomile, kuhambisana ne-polydipsia (ukukhuphula amandla okuphuza) kufinyelela kumalitha angama-8-10 ngosuku,
i-polyuria (ukuchama okweqile nokuvama),
i-polyphagy (isifiso esandayo),
isikhumba esomile nolwelwesi lwama-mucous, okuhambisana nokulunywa (kufaka phakathi i-perineum), izifo ezithinta isikhumba,
ukuphazamiseka kokulala, ubuthakathaka, ukusebenza okunciphile,
ukugoba emisipha yethole
Ukubonakaliswa kohlobo lweshukela I kuboniswa ukomela okukhulu, ukuchama kaningi, isicanucanu, ubuthakathaka, ukugabha, ukukhathala, indlala engapheli, ukuncipha kwesisindo (ngokudla okujwayelekile noma okwandayo), kanye nokungasebenzi.
Isibonakaliso sikashukela ezinganeni ukubukeka kokuhlanza umbhede, ikakhulukazi uma ingane ingakaze ichame embhedeni. Ngohlobo I isifo sikashukela i-mellitus, i-hyperglycemic (esinezinga ushukela wegazi ophakeme kakhulu) kanye ne-hypoglycemic (ushukela wegazi ophansi) zivame ukukhula, zidinga izindlela eziphuthumayo.
Kuhlobo II isifo sikashukela i-mellitus, ukulunywa, ukoma, ukungaboni kahle, ukozela kakhulu nokukhathala, izifo zesikhumba, ukuphulukiswa kancane kwamanxeba, i-paresthesia kanye nokuqina kwemilenze. Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo II zivame ukukhuluphala.
Inkambo yesifo sikashukela ivame ukuhambisana nokulahleka kwezinwele emaphethelweni aphansi kanye nokukhula okukhuphukayo ebusweni, ukubonakala kwe-xanthomas (ukukhula okuncane okuphuzi emzimbeni), i-balanoposthitis emadodeni kanye ne-vulvovaginitis kwabesifazane.
Njengoba isifo sikashukela siqhubeka, ukuphazamiseka kwazo zonke izinhlobo zemetabolism kuholela ekunciphiseni kokungazetheki kanye nokumelana nezifo. Inkambo ende yesifo sikashukela ibangela ukulimala ohlelweni lwamathambo, oluboniswa yi-osteoporosis (rarefaction of izicubu zamathambo).
Ubuhlungu emhlane ongezansi, amathambo, amalunga, ukusatshalaliswa kanye nokuhanjiswa kwe-vertebrae kanye nokuhlangana, ukuqhekeka kanye nokudilika kwamathambo okuholela ekukhubazekeni.
Akuzona zonke iziguli ezingaba nezimpawu ezifanayo, kaningi azikhulunyelwa noma isikhathi eside azivezi nhlobo. Kwezinye izimo, izimpawu zokuqala zesifo zihlulwa kwisikhunta-njengemvubelo, (ngokwesibonelo, i-thrush).
- Ukuchama kaningi, - Ukuncipha kwesisindo okungachazwanga, - Ukudinwa okukhulu, - Ukomela ngokweqile, - Ukubamba ngamandla noma ukufiphala ezandleni noma ezinyaweni, - Umuzwa ohlale ukhathala, - Isikhumba esomile kakhulu, - Amanxeba okuphulukisa kancane kancane, - Ukutheleleka njalo, - Ukucanuzelelwa inhliziyo noma ukuhlanza. , - Ubuhlungu esiswini, - Umfutho wegazi ophakeme.
Ukuba khona kwesifo sikashukela i-mellitus kufakazelwa ukuzila kwe-glucose ye-capillary engaphezulu kwe-6.5 mmol / L. Imvamisa, akukho glucose emchameni, ngoba Ibambezelwe emzimbeni ngesihlungi sezinso.
Ngokukhuphuka kwamazinga kashukela egazini angaphezu kuka-8,8-9,9 mmol / L (160-180 mg%), isithiyo sezinzwa sehluleka futhi sidlule i-glucose kumchamo. Ukuba khona ushukela kumchamo kunqunywa yimichilo ekhethekile yokuhlola.
I-glucose ephansi egazini lapho iqala ukutholakala khona kumchamo ibizwa ngokuthi "umkhawulo wezinso."
Ukuhlolwa kwesifo sikashukela okusolwayo kufaka ukunquma inani:
glucose osheshayo egazini le-capillary (kusuka emunweni),
ushukela kanye nemizimba ye-ketone emchameni - ukuba khona kwawo kukhombisa isifo sikashukela,
i-glycated hemoglobin - inyuke kakhulu kushukela i-mellitus,
I-C-peptide ne-insulin egazini - ngohlobo I I-mellitus yesifo sikashukela, zombili izinkomba zincishiswa kakhulu, ngesifo sikashukela sohlobo II - esingaguquki,
ukwenza isivivinyo sokuxineka (isivivinyo sokubekezelela i-glucose): ukuzimisela kokuzila ushukela kanye namahora angama-1 no-2 ngemuva kokumunca u-75 g ushukela oncibilikisiwe ezinkomishini eziyi-1.5 zamanzi abilisiwe. Umphumela wokuhlolwa okungalungile (okungaqinisekisi isifo sikashukela) uthathwa namasampula: esiswini esingenalutho
Izimbangela Zesifo Sikashukela
I-insulin ye-hormone, ekhiqizwa kuma-pancreas, inesibopho sokucubungula ushukela emzimbeni. Isisekelo sokuvela kwesifo sikashukela ukwephulwa kwezinqubo ze-metabolic, ikakhulukazi i-carbohydrate metabolism, eshukunyiswa yizizathu ezimbili:
ukukhiqizwa kwe-insulin okunganele yi-pancreas - ushukela awucutshungulwa ngokuphelele futhi unqwabelana egazini, okuholela ekubhujisweni kwezicubu ezinempilo zezitho ezibalulekile,
ukungakwazi kwezicubu zomzimba, ikakhulukazi isibindi, ukucubungula nokusebenzisa ushukela ngenxa yokulahlekelwa ukuzwela kwe-insulin noma ukuthuthukiswa kwamasosha omzimba abhubhisa amaseli we-pancreatic beta abhekene nokukhiqizwa kwe-insulin.
Imbangela yesifo sikashukela ekukhiqizeni okunganele kwe-insulin yi-pancreas
Ukuvusa ukungasebenzi kahle kwama-pancreas noma ukuguqula ukubonakala kwezicubu zomzimba ku-insulin ziyakwazi:
izifo ezidluliselwe ngegciwane - ama-mumps, i-rubella, i-cytomegalovirus, ukutheleleka nge-enterovirus,
ukulimala kwamaseli e-beta ngenxa yokuvuvukala noma i-oncology yamanyikwe, isibindi.
Isifo sikashukela sohlobo 2 siba khona lapho amanyikwe engakhiqizi i-insulin eyanele noma izicubu zezitho zangaphakathi zingakuboni.
Izimbangela Ezingadala Isifo Sikashukela
Lesi simo senzeka ngenxa yezizathu eziningi:
ukukhuluphala - i-enzyme evimbela ukwakheka kwe-insulin kuqongelela izicubu ze-adipose,
I-hypothyroidism - ukwehla kwe-metabolism ngenxa yokukhiqizwa okunganele kwamahomoni e-thyroid,
cholesterol ephezulu yegazi
umfutho wegazi ophakeme, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi,
Izifo zezinso, isibindi, ama-pancreas wesimo esingamahlalakhona,
imiphumela emibi yezidakwamizwa - i-thiazide diuretics, izidakamizwa ze-hormonal ze-steroid.
Uhlobo 1 no-Type 2 sikashukela yizifo ezi-2 ezihlukile etiologyology yazo.
Ithebula "Izinhlobo zesifo sikashukela"
Uhlobo 1 - Umuntu Othembela Ku-Insulin Kwenzeka inqubo yokubhujiswa kwe-autoimmune ephelele yamaseli we-pancreatic abhekene nokukhiqizwa kwe-insulin. I-Pathology ikhula ezinganeni nakubantu abasha abangaphansi kweminyaka engama-25
Uhlobo 2 - i-non-insulin ezimele Ama-pancreas ayaqhubeka nokukhiqiza ama-hormone, kepha akwanele ukucubungula kanye nokwenziwa kweglucose. Lesi sifo siqala ukwanda kubantu ngemuva kweminyaka engama-45 futhi singumphumela wokungondleki kahle, imikhuba emibi, izifo ze-vascular kanye ne-pathologies yezitho zangaphakathi
Ngaphezu kwalokho, uhlobo lwesikhashana sikashukela - lomthambo, lodwa. Kwenzeka ngesikhathi sokukhulelwa, lapho, ngaphansi kwesenzo sama-hormone akhiqizwayo, ukuzwela kuwo kuvinjiwe noma ama-pancreas awakwazi ukubhekana nokukhiqizwa okwandayo kwe-insulin. Lokhu kwenzeka ngokukhulelwa sekwedlule isikhathi (ngemuva kweminyaka engama-40), ukukhuluphala ngokweqile, ukubekeka phambili kulesi sifo. Ngemuva kokuzalwa, umsebenzi wamaseli we-beta wenziwa waba ngokwejwayelekile.
Ngokusho kobukhulu bezimpawu nokukhula kwezinkinga, isifo sikashukela sinama-degree ayi-3 - amnene, alinganisele futhi aqine.
Ithebula Lesifo Sikashukela
Degree ye Isici
Isigaba sokukhanya noma sokuqala Ushukela wegazi ubonwa esiswini esingenalutho, kepha hhayi ngaphezu kwe-8.1 mmol / l, phakathi nesikhathi inkomba ingaguquki. Akukho glucose emchameni noma awudluli kuma-20 g / l. Ukwelashwa kwezidakamizwa akudingekile. Ukudla okukhethekile kubekiwe
Isilinganiso I-glucose ye-plasma ifinyelela ku-14 mmol / ml, kumchamo - kuze kufike ku-40 g / l. Umuntu uzwa ukomela okuqinile, ukuchama kaningi, emlonyeni wakhe kuyabuna. Isikhumba silimele ngamanxeba okuhlanza, kukhona i-lesion of the re tis tis, imithambo yegazi
Isigaba esiqinile - esinqunyelwe noma esinqunyelwe Ushukela wegazi ukhuphuka ufike kuma-20 mmol / L nangaphezulu, kumchamo - angaphezu kuka-45 g / L. Izimpawu zesifo sikashukela ziyashiwo, akukho ukukhiqizwa kwe-insulin, imisebenzi yezinso, inhliziyo, isibindi, ubuchopho ayinamsebenzi. Ukwenza ngcono isimo sesiguli nokuvimbela noma ngubani kungenzeka kuphela ngokufakwa kwe-insulin
Yimuphi udokotela okufanele ngiye kuye?
Uma usola isifo sikashukela, umuntu uphendukela ku-endocrinologist. Uchwepheshe uphatha isifo sikashukela futhi uqaphe isimo sesiguli.
Uma usola isifo sikashukela, iya ku-endocrinologist.
Ukuthola izinga lokulimala kwezitho zangaphakathi, okucindezela ngokweqile ushukela egazini, kuhlolwe okunye ukuhlolwa:
Ngokusetshenziselwa esiphethweni kodokotela abanohlonze, i-endocrinologist ikhetha uhlobo olusezingeni elifanele lokwelashwa sikashukela, ilungeze nezidakamizwa ukuze kugcinwe izitho ezibalulekile.
Indlela eyinhloko yokuhlonza isifo sikashukela ukuhlolwa kwegazi okusheshayo kusuka emthanjeni noma emunweni. Isimo sikashukela kumuntu ophile kahle asidluli i-6.1 mmol / l ye-capillary ne-7.0 mmol / l yegazi eline-venous. Amanani ayisethenjwa adlulayo angubufakazi besifo sikashukela.
Amanani wemigomo nokuphambuka kwe-glucose egazini
Izifundo zokucacisa zibekelwe ukucacisa lesi sifo.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose - Ngemuva kokunikela ngegazi esiswini esingenalutho, umuntu uthatha i-glucose powder (75 mg), evinjwe ngamanzi, futhi aphumelele isivivinyo ngemuva kwamahora ama-2. Amazinga kashukela egazini angaphezu kuka-11.2 mmol / L akhombisa ukuthuthuka kwalesi sifo.
Ukunqunywa kwezinga le-hemoglobin ye-glycosylated - kukhombisa umuthi we-pathology.
Ukuthola ushukela emchameni. Umuntu ophilile akanalo ushukela kumchamo. Ukuba khona komaka onjalo kuwuphawu lwentuthuko esebenzayo yesifo sikashukela.
Ukuhlolwa komchamo ukuze kutholakale izidumbu ze-ketone (acetone). Imvamisa, umaki lo ulahlekile. Ukuba khona kwayo nokuhlushwa kukhombisa ubukhulu besifo.
Izimpawu nezimpawu zesifo sikashukela mellitus (general).
Uma uziqaphela wena lezo zimpawu, khona-ke lesi yisizathu sokuya kudokotela ayohlolwa. Noma, okungenani, nikela ngegazi ushukela.
Izimpawu ezivame kakhulu zesifo sikashukela:
ukulunywa njalo kwezindawo ezahlukahlukene, futhi akunakwenzeka ukuyiqeda ngamafutha akhethekile. Imvamisa, i-perineum, izinyawo, izintende zezandla, isisu, ukuluma,
ngifuna ukulala njalo, ukuswela amandla, noma ngabe uphumule ngokwanele ebusuku,
izinwele ziyancipha, zikhula kabi, ziqothuka, azinawo umsoco ngenxa yokulimala komzimba,
amanxeba esikhumba apholisa kahle, ngisho amancane awapholi isikhathi eside,
womile njalo, womile kakhulu,
inani lomchamo liyakhuphuka, umuntu uvame ukuvuka ebusuku ethoyilethi. Ntambama, "ingagijima" njalo ngehora,
ukungasebenzi komzimba kuncishisiwe, umuntu uvame ukuba nenkinga yamakhaza "wegciwane", angaba nezinkinga.
Izimpawu zohlobo 1 sikashukela.
Isifo sikashukela sohlobo 1 sinezimpawu ezithile ezihlukile kwezimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2.
Okokuqala, lokhu ukwehla okubukhali kwesisindo. Ngasikhathi sinye, umuntu uba nenhliziyo eyandayo, udla kakhulu, kepha nokho anciphe isisindo. Kuhogela i-acetone ephuma emlonyeni, kunuka iphunga elifanayo kumchamo. Lokhu kungenxa yokuthi kwakheka imizimba eminingi ye-ketone emzimbeni - imikhiqizo ebolile yezicubu ze-adipose.
Izimpawu eziphambili okufanele zikhathazeke yindlala eqinile njalo, ukuya endlini yangasese, ukoma okungapheli ngenxa yokuphelelwa ngamandla kwezicubu zomlomo, nomlomo owomile. Isicanucanu, ukuhlanza, ubuthakathaka obungapheli, isiyezi nakho kuvamile. Umlingiswa kungenzeka ungashintshi ube ngcono, ukuvela kuyashaqeka.
Ukuqina, ukusinda, ukushuba kungavela emilenzeni. Ukushisa komzimba kuyehla. Umbono uyawohloka, kungathi ngeveli phambi kwamehlo. Ukulunywa kuvela futhi, ikakhulukazi ku-perineum, kanye ne-furunculosis.
Izingane zingase zibe nokulala embhedeni, futhi uma lokhu bekungakaze kwenzeke ngaphambili, khona-ke lokhu kuyimpawu ekhanyayo yesifo sikashukela sohlobo 1.
Umuntu angawela enkingeni uma engabonanga kudokotela ngesikhathi.
Lezi zibonakaliso zanda kakhulu futhi kungenzeka zingaqashelwa.
Izimpawu zezinkinga zesifo sikashukela i-mellitus (isigaba esithuthukile).
Esigulini esinesifo sikashukela, umsebenzi wezitho eziningi zangaphakathi uyaphazamiseka. Enye yezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela ukungaboni, ngoba i-retina ibhujiswa ushukela wegazi ophezulu. Okunye futhi okubucayi obukhulu kakhulu yi-gangrene, eyenzeka ngomonakalo emithanjeni yemilenze. Kulokhu, ukunqunywa komlenze kuyadingeka.
Ukuphazamiseka kwemithambo yegazi kuyizimpawu ezivame kakhulu zokuphazamiseka kwesifo sikashukela. Umuntu uhlakulela isifo sokuqina kwemithambo yegazi, okuwukuthi, ama-plaque avela emikhunjini, ngoba lapho kukhanya khona umkhumbi, ingcindezi ikhuphuka (umfutho ophakeme wegazi), umthwalo osenhliziyweni uyanda, bese kuvela i-angina pectoris. Izitsha zobuchopho nazo ziyahlupheka, ngakho-ke inkumbulo ingaphazamiseka.
Kusukela ohlangothini lwezinso, i-pyelonephritis, i-nephropathy ingahlakulela.
Unyawo lwesifo sikashukela lubuye lube nesimilo, lapho ukuhamba kwegazi emilenzeni kuphazamiseka, izilonda ziyavela emilenzeni, nokuzwela kwemilenze kuyancipha.
Isifo sikashukela, izinsini ziyahlupheka, ukopha kuvela, amazinyo angaqala ukuphuma.
Isikhumba esomile, amakhasi, kanye namazipho.
Emadodeni, uphawu olukhona lwesifo sikashukela ukungabinamandla. Kwabesifazane, umjikelezo wokuya esikhathini ungaphazamiseka.
Uma ubona izimpawu zesifo sikashukela, bese uthintana nodokotela, unganqikazi. Isibhedlela sizodinga ukunikela ngegazi nomchamo ngokuqukethwe ushukela. Igazi linikelwa zombili esiswini esingenalutho nangemva kokudla inani elithile likashukela. Ungabi nandaba nempilo yakho!
Thayipha 1 bese uthayipha izidakamizwa ezi-2
Isifo sohlobo 1 singalashwa nge-insulin kuphela. Ngokuya kobunzima benkambo yesifo sikashukela, kuthathwa umthamo ngamunye, okusho ukuthi ukujova kwe-hormone yokwenziwa amahlandla amaningi ngosuku. Ngokuphuza ngokungafanele kwe-insulin emzimbeni, kuba nesifo sikashukela, umphumela waso obuvama umphumela.
Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, ukwelashwa kuqukethe ukuthatha i-insulin ngaso sonke isikhathi.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 abayidingi imijovo ye-insulin.
Ngokwelashwa kwabo, amaqembu emithi asetshenziswa anikela ekukhiqizweni okujwayelekile kwe-insulin kanye nokumuncwa kweglucose.
I-Thiazolidinediones - izidakamizwa ezikhulisa ukuthikamezeka kwezicubu zomzimba ukungena ku-insulin - i-Diaglitazone, i-Actos, iPioglar.
I-Biagunids - yehlisa ukuphuma kweglucose kusuka kumaseli wesibindi futhi wandise ukuzwela kwezicubu zomzimba kuya ku-insulin - IFomu, iBagomet, Metformin 850, Glattin.
Izivuseleli ze-insulin - Ukugqugquzela kwamaseli we-beta ekukhiqizweni kwama-hormone kanye nokwenza ngcono izicubu zomzimba kuye - Maninil, Glurenorm, Amaril.
Meglitinides - Yehlisa amazinga kashukela ngemuva kokudla, kusebenze amaseli we-beta ekukhiqizweni kwe-insulin - Starlix, Novonorm.
IGlurenorm isiza umzimba ukuthi ukhiqize inani elifanelekile le-insulin
Ukudla kudlala indima ebalulekile ekwelashweni kwesifo sikashukela. Ngohlobo 1, lokhu kuyisixhumanisi esisizayo, futhi ezinhlotsheni ezimbili zokwelapha kuyingxenye ebalulekile yokulondolozwa kwesimo seswekile.
Izici eziyinhloko zokudla okunempilo:
ukudla ukudla okweqile (kufika izikhathi ezi-6 ngosuku),
qapha inani lamandla okudla - kufanele kube impela njengoba umzimba ufuna,
ungasebenzisi kabi ama-carbohydrate, amaprotheni namafutha - ulinganise ngokuqinile izakhi zomzimba,
faka ukhukhamba, utamatisi, uphizi oluhlaza okotshani, imifino, isipinashi, iklabishi (okusha futhi kukhethiwe) ekudleni - imikhiqizo ifaka umuzwa wokugcwala, okuqeda ukudla ngokweqile,
yidla ushizi omningi, i-soy, i-oatmeal - lokhu kuzosiza ukuthuthukisa ukusebenza kwesibindi esibuthakathaka,
nciphisa ukudla izinhlanzi ezicebile nemhluzi yenyama, ukudla okuthosiwe nokunamafutha, usawoti.
Ukudla kwesifo sikashukela kufanele kube nokulinganisela, kuqukethe inani elifanele lamavithamini kanye namaminerali.
Ithebula “Yini okungadliwa noshukela”
Imikhiqizo evunyelwe Isinkwa sama-rye, ama-crackers, amakhukhi angenakukwenza ushukela
Inyama ebuthaka, umhluzi wezinhlanzi, amasobho ngemifino
Izitsha ezivela kunogwaja, inyama yenkomo, inkukhu, ukhokho, i-carp, i-pike perch - zidliwe, zibilisiwe noma zibanjiwe
Imifino, iklabishi, isithombo, amazambane, beet, izaqathe, utamatisi, ukhukhamba, isipinashi, arugula
I-Steam omele, amaqanda abilisiwe (ayi-amaqanda angaphezu kuka-2 ngosuku)
Izithelo namajikijolo ezinhlobonhlobo ze-acidic - ama-apula, ulamula, ama-currants, ama-cranberry, amawolintshi, amakhompiyutha angenawo ushukela noma obambele wona
Ubisi, ukhokho ushizi
Itiye lobisi olubuthakathaka, iziphuzo zezithelo, ujusi katamatisi
Ukudla okuvinjelwe Yonke i-confectionery equkethe ushukela, ushokoledi, ujamu, uju, i-khekhe
Isipayisi esinamafutha, usawoti, othosiwe, obhemayo
Soseji, izinongo, izinongo
Ubhanana, omisiwe, amagilebhisi
Imiphumela engaba khona kanye nezinkinga
Ukweqisa kweglucose egazini kuthinta kabi zonke izitho, kubulale amaseli okunempilo kancane kancane. Izinkinga ezivame kakhulu nemiphumela yazo ifaka lezi zimo ezilandelayo:
ukwehluleka kwenhliziyo ne-renal futhi, ngenxa yalokho, i-edema yendawo nejwayelekile,
Ama-pathologies we-vascular akhuthaza ukugxuma kumfutho wegazi (akhuphuka noma anciphise kakhulu),
Ubuhlungu emikhawulweni ephansi lapho uhamba nokuzivocavoca ngokomzimba,
ukubonakala kwezilonda eziyizidudla emilenzeni,
ukulimala okukhulu emikhunjini emincane nemikhulu, okuholela ebuchosheni bemikhawulo ephansi.
Imvamisa, kuvela izilonda ezinamahloni emilenzeni ngesifo sikashukela.
Ngabe ihlolwa kanjani ushukela wegazi?
Uma izimpawu zesifo sikashukela zivele enganeni noma kumuntu oneminyaka yobudala engaphansi kweminyaka engama-25, ongenaso isisindo ngokweqile, khona-ke kungenzeka ukuthi isifo sikashukela singokwesiqu sokuqala. Ukuze uyelaphe, kudingeka imijovo ye-insulin.
Uma umuntu oneminyaka engama-40 noma ngaphezulu esolwa ngokweqile esolwa ngokuba nesifo sikashukela, khona-ke lokhu kungenzeka ukuthi kube yigrade lesibili lesifo sikashukela.
Kodwa-ke, lezi yizibalo ezilinganisiwe. Ukuxilongwa okusobala kanye nesigaba sikashukela kungenziwa kuphela nge-endocrinologist.
Isigaba 1 sikashukela - izimpawu
Ngokuyinhloko, izimpawu zesifo ziqala ngesikhathi esifushane, ezinsukwini ezimbalwa. Imvamisa umuntu uvama ukuba nesifo sikashukela (ukulahlekelwa ukwazi), ukhonjwa ngokushesha emtholampilo lapho kutholakala ukuthi unesifo sikashukela.
Izici zesifo sikashukela se-1st degree:
Isifiso esengeziwe sokuphuza: isiguli siphuza amalitha ama-3-5 ngosuku,
iphunga le-acetone ngesikhathi sokuphefumula,
isifiso esinamandla, umuntu udla ukudla okuningi, kepha alahlekelwe isisindo,
ukuchama okunamacebo amaningi, ikakhulukazi ebusuku,
ukuphulukiswa kwenxeba okumpofu
isikhumba, isikhunta noma amathumba avela.
Imvamisa, isifo sikashukela seBanga 1 siqala emadodeni ngemuva kwamasonto amabili noma inyanga ngemuva kokuba isiguli sihlaselwe isifo (isimungumungwane, irubella, umkhuhlane) noma ngemuva kwesimo esicindezelayo.
Isigaba 2 sikashukela - izimpawu
Isifo sikashukela sohlobo lwesibili, isigaba singakha kancane kancane, ngaphezulu kweminyaka eminingana, njengomthetho, kubantu asebekhulile. Kwabesilisa nabesifazane, ukukhathala kwenzeka, ukuphulukiswa kwesilonda esingesihle, ukulahleka kombono nokukhubazeka kwememori. Kodwa-ke, akasoli ukuthi lezi yizimpawu zokuqala zalesi sifo. Imvamisa, ukuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 kwenziwa ngengozi.
Izici zesifo sohlobo 2:
izimpawu zesifo sikashukela salolu hlobo: ukukhathala, umbono omncane, ukuguqulwa kwenkumbulo,
Izinkinga zesikhumba: ukucasuka, ukhunta, ukuphulukiswa kwesilonda esingesihle,
isidingo esithe xaxa sokuphuza - ama-3-5 amalitha amanzi adakwa ngosuku,
ukuchama okuphindaphindwe ebusuku,
ukubonakala kwezilonda ezinsolweni nasemadolweni, imilenze iyagungqa, ukudinwa, ukulimala ngesikhathi sokunyakaza,
abesifazane bakhula ne-candidiasis (thrush), okunzima ukuyelapha,
ekuhambeni kwesikhathi kwesifo - ukunciphisa umzimba,
ezigulini ezingama-50, lesi sifo singaba ngaphandle kwezimpawu,
amadoda anezinkinga potency.
I-30% yamadoda - anciphile umbono, isifo sezinso, ukushaywa unhlangothi ngokuzumayo, ukushaya kwenhliziyo. Ukuvakashela udokotela ngokushesha kuyadingeka ngemuva kokuba kubonakale lezi zimpawu zesifo sikashukela.
Uma kunesisindo esithe xaxa, ukukhathala okusheshayo kwenzeka, ukuphulukiswa okungalapheki kwamanxeba kuyabonakala, umbono kanye nenkumbulo ziye zaba zimbi kakhulu, ngakho-ke akufanele ube yi-lazy futhi udinga ukuthola isilinganiso sikashukela wegazi.
Ngokuqukethwe ushukela omningi, ukwelashwa kufanele kuqale. Uma lokhu kungenziwa, khona-ke izimpawu zesifo sikashukela zizoholela ekufeni ngaphambi kwesikhathi zilindele isiguli, okuyothi ngaphambi kwalokho ubunzima besifo sikashukela - izilonda, ukuqhekeka, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi, ubumpumputhe kanye nomsebenzi wezinso ume.
Ukulawula isifo sikashukela sohlobo 2, izigaba zilula kunokuba zibonakala ekuqaleni.
Izimpawu zesifo sikashukela sengane
Ubuncane beminyaka yengane enezinsolo zesifo sikashukela, ziya ngokuya zihluka kakhulu izimpawu zesifo sikashukela esimweni esidala sabafana. Zijwayeze nezimpawu zesifo sikashukela sengane.
Lokhu kufanele kwaziwe bobabili kodokotela nakubazali bengane egulayo. Eqinisweni, odokotela bezingane abavamile ngesifo sikashukela. Izimpawu zesifo sikashukela sezingane nodokotela zivame ukuthathwa izimpawu zezinye izifo.
Umehluko phakathi kwesigaba sikashukela 1 no-2
Isifo sikashukela sohlobo loku-1, isigaba esibonakaliswe ngokusobala okusobala, senzeka singalindele. Lesi sifo siwuhlobo 2, isigaba - inhlala-mpilo iba mbi ngokuqhubeka kwesikhathi. Kuze kube muva nje, izingane bezine-Type 1 sikashukela kuphela, izigaba, nokho, namuhla lokhu akusekho. Thayipha isifo sikashukela esingu-1, isilinganiso hhayi ngokweqile.
Ukuhlukanisa phakathi kohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, isilinganiso kufanele sibe ukuhlolwa komchamo ushukela, igazi le-glucose ne-C-peptide.
Ukuchama okumanzi nokuqina okukhulu (i-polyuria)
Kubantu abanesifo sikashukela, ngasizathu simbe, izinga likashukela wegazi liyakhuphuka, bese umzimba womuntu ufuna ukuyisusa ngomchamo. Kodwa-ke, ngokuqukethwe okuphezulu kwe-glucose kumchamo, izinso azidlulisi, ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi kube nomchamo owengeziwe.
Ukuze ukhiqize inani eliningi lomchamo, umzimba udinga isilinganiso esikhulu soketshezi. Ngakho-ke, kunesibonakaliso sokoma okwandayo ezigulini ezinesifo sikashukela, futhi kunesifiso esijwayelekile sokuchama. Isiguli sivuka ebusuku kaningi, okuyisibonakaliso esicacile sesigaba sokuqala sesifo sikashukela.
Ukumunca i-acetone ekuphefumuleni
Kwabesilisa abagulayo abanesifo sikashukela, inani elikhulayo le-glucose egazini, noma kunjalo, amangqamuzana awakwazi ukubuthatha, ngoba i-insulin ayanele, noma imisebenzi yayo ayisebenzi. Ngenxa yalesi sizathu, amaseli (ngaphandle kwamangqamuzana obuchopho) ayaphoqelelwa ukuthi ashintshele ekusebenziseni kokugcinwa kwamafutha.
Singangeza ukuthi izimpawu zesifo sikashukela yilapho ngesikhathi sokuqhekeka kwamafutha kukhona: i-acetone, i-acetoacetic acid, i-b-hydroxybutyric acid (imizimba ye-ketone). Ezingeni eliphakeme lezidumbu ze-ketone, zikhululwa ngesikhathi sokuphefumula, ngenxa yalokho, iphunga le-acetone likhona emoyeni.
I-Coma noma i-ketoacidosis (isifo sikashukela sebanga 1)
Kunephunga le-acetone emadodeni lapho ukhipha umoya - lokhu kukhombisa ukuthi umzimba udla amafutha, kanti kukhona nezinto ze-ketone egazini. Uma i-insulin ingalangeni ngendlela yesikhathi, khona-ke izinga lezakhi ze-ketone landa kakhulu. Kulesi simo, umzimba awukwazi ukubekezelela ukungathathi hlangothi kwabo, i-acidity yegazi iyashintsha.
I-pH yegazi ingu-7.35-7.45. Lapho esengaphansi kancane noma ngaphezulu kwalomkhawulo, umuntu uba ebulalayo, abuthe, isifiso sakhe sokudla siya ngokuba sikhulu, kuye kube sengathi kunesicanucanu, kwesinye isikhathi kuhlanza, nobuhlungu obuthuntu esiswini. Lezi yizimpawu ze-ketoacidosis yesifo sikashukela.
Lapho, ngenxa ye-ketoacidosis, isiguli siwela enkanjeni, khona-ke ukukhubazeka kungenzeka, kufe ngisho nokufa (7-15%). Uma ukuxilongwa kwesifo sesigaba 1 kungasungulwa, ukuba khona kwe-acetone emgodini womlomo akufanele kuqaphele.
Lapho welapha isifo esigaba 2 emadodeni anokudla okuphansi kuma-carbohydrate, isiguli singathola i-ketosis - ukwanda kokuqukethwe kwegazi kwezakhi ze-ketone. Lesi simo somzimba sibhekwa njengejwayelekile.
Akunamphumela onobuthi. Izinga le-pH legazi aliweli ngaphansi kwe-7.3, ngakho-ke, naphezu kwephunga le-acetone ngesikhathi sokuphefumula, umuzwa uvamile. Kulokhu, umuntu ukhipha isisindo ngokweqile.
Ukwanda kokudla kweziguli
Kwabesilisa abagulayo abanesifo sikashukela, ukuntuleka kwe-insulin, noma akunamphumela ophumelelayo. Futhi yize kune-glucose eyanele egazini, amangqamuzana awakwazi ukukusebenzisa ngenxa yokuntuleka kwe-insulin futhi aphoqwa ukuba "yindlala". Isiginali yendlala ingena ebuchosheni, futhi umuntu ufuna ukudla.
Isiguli sidla kahle, kepha umzimba awukwazi ukudonsa ama-carbohydrate eza nokudla. Isifiso esinamandla siyabonakala kuze kube yilapho insulin iqala ukusebenza, noma kuze kube yilapho amaseli eqala ukumunca amafutha. Ngalo mphumela, isiguli esinohlobo lwe-1 isifo sikashukela sikhula i-ketoacidosis.
Isikhumba siyasha, i-thrush senzeka, ukubonakaliswa kokungunda kuyabonakala
Esigulini esinesifo sikashukela, amazinga kashukela akhuphuka kuwo wonke uketshezi lomzimba. Isamba esandisiwe sikashukela sikhishwa ngokujuluka. Ama-Microorganisms afana nezimo zomswakama ezifudumele nezineshukela eliphezulu, okuyisakhi sazo. Kufanele sizame ukunciphisa inani le-glucose egazini, khona-ke izinkinga nge-thrush nesikhumba zizohamba.
Ukulimala okulimala kogulayo ezigulini ezinesifo sikashukela
Inani ngokweqile le-glucose egazini lamadoda linomphumela onobuthi ezindongeni zemithambo yegazi, kanye namaseli agezwe yigazi. Ukuze amanxeba alulame kangcono, izinqubo eziningi eziyinkimbinkimbi zenziwa emzimbeni, kufaka phakathi ukuhlukaniswa kwamaseli wesikhumba anempilo, njengasesithombeni.
Ngenxa yokuthi izinga lokukhuphuka kweglucose linomphumela onobuthi ezicutshini zamadoda, izinqubo zokwelapha zihamba kancane. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kwale mibandela, ukusakazeka kwezifo kuyabonakala. Kuhle ukungezelela ukuthi abesifazane abanesifo sikashukela baguga ekuqaleni.
Ekuphetheni, kufanelekile ukukhumbula futhi ukuthi uma kunezimpawu zesifo sikashukela emadodeni noma emantombazaneni anoma yiluphi uhlobo, kubalulekile ukubheka inani le-glucose egazini ngokushesha okukhulu, futhi uvakashele ne-endocrinologist.
Ayisekho indlela yokwelapha ngokuphelele isifo sikashukela, noma kunjalo, kungenzeka ukusilawula futhi uphile impilo ejwayelekile. Kungaze kube nzima njengoba kuzwakala.
Kunengqondo ukuvimbela ukukhula kwezinkinga ezinkulu uma ungazinaki izimpawu zokuqala zesifo.
Izindlela zokuvimbela nezokuvimbela ziyasiza:
ukunamathela ngokuqinile emithini - imithamo enqunyelwe ngemuva kwesikhathi esifanayo,
Ukudla nokudla okunempilo
indlela yokuphila esebenzayo, ukuzivocavoca okulinganiselayo, ukuhamba amabanga amade emoyeni omusha,
ukuhambisana nemithamo nezincomo zokulawulwa kwe-insulin.
Indlela yokuphila esebenzayo nokulandela imithetho yokondleka okuhle kuyindlela evimbela kakhulu isifo sikashukela
Ukuqongelela ushukela egazini, ukwehla komkhiqizo we-insulin, ukungakwazi ukucubungula futhi ukudonsa ushukela kuholela ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela. Lesi sifo sinezindlela ezi-2 eziphambili - uhlobo 1 no-2, oluhlukile ngohlobo lokuvela nezimpawu, kanye nobunzima obungu-3. Izimpawu ezicacile ze-pathology ukomela okukhulu, ukuphuza kakhulu nokuchama okwandayo, ukuncipha okukhulu kwesisindo ngokudla okuhle. Ukwelashwa kuncike ekunganakwa nakuhlobo lwesifo sikashukela - uhlobo 1 luphathwa kuphela nge-insulin, 2 - ngezidakamizwa ezikhuthaza ukukhiqizwa kwe-hormone ebalulekile. Ukudla okukhethekile, ukubambelela kwemiyalelo kadokotela, indlela yokuphila enempilo yizona zinto eziyinhloko zokwelashwa kwezifo ze-endocrine.
Ukukala le ndatshana
(1 izilinganiso, isilinganiso 5,00 kwezingu-5)
Izimpawu zesifo sikashukela esikhunjeni (isithombe 2) imi kanje:
amanxeba amancane nokuncipha akuphulukisi kahle,
isikhumba esinesifo sikashukela i-mellitus (bheka isithombe ku-gal) kunzima ukuselapha, amathumba, amathumba angakheka kuso, kaningi kumathole nasezinyaweni,
Ulimi lwesifo sikashukela selomile, nesikhumba somgogodla womlomo.
Izinkinga ezifanayo zesikhumba zingabangelwa ezinye izifo, noma kunjalo, kungcono ukuyidlala ngokuphephile, vakashela udokotela oyi-endocrinologist nodokotela wesikhumba ukuze uqonde ukuthi iyiphi inkinga obhekene nayo. Mhlawumbe lezi yizibonakaliso zesikhumba ku-mellitus yesifo sikashukela.
Isifo sikashukela esithombeni sabesifazane
Sonke sizwe kaninginingi ukuthi isifo esitholakale sisencane kulula ukuselapha noma ukuvimbela ubunzima baso. Kungakho kubalulekile ukunaka izimpawu eziphazamisayo.
Izimpawu zesifo sikashukela kubantu besifazane (isithombe 3) sinezici ezithile. Owesifazane angaqala ukunciphisa isisindo ngaphandle kokusebenzisa ukudla. Iphunga le-pungent elifana ne-acetone livela emlonyeni. Kunezinkinga zesikhumba. Konke lokhu kufanele kube yisikhathi sokuhambela umtholampilo.
Izimpawu zesifo sikashukela kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-40 - isimo esibi kakhulu sezipikili nezinwele, ukungasebenzi kahle komjikelezo wokuya esikhathini, ukukhathala, ubuthakathaka, isiyezi ngaphandle kwesizathu esibonakalayo. Izimpawu zalesi sifo kubantu besifazane abaneminyaka engama-50 ubudala - ukhubazeka okubukwayo, lapho yonke into ibonakala kungathi inkungu.
Izimpawu zesifo sikashukela kubantu besifazane
Kaningi, ungabona izimpawu zesifo sikashukela kwabesifazane esikhunjeni (bheka isithombe 4). Uba owomile, abukeke emdala kunontanga yakhe. Imvamisa bathola ukungaphatheki kahle endaweni yangasese, ukoma, ukushiswa. Abesifazane bavame ukukhathazeka ngezifo ezenzeka njalo zowesifazane. Lezi zinkinga futhi ziyizimpawu zesifo sikashukela. Futhi lapha akwanele ukuvakashela i-cosmetologist noma i-gynecologist, kakhulu, uzodinga ukubonisana nodokotela we-endocrinologist.
Isifo sikashukela esithombeni samadoda
Izimpawu zesifo sikashukela i-mellitus emadodeni (isithombe 5) ziyefana nokubonakaliswa kwabesifazane nezingane, kuyilapho imilenze ihlupheka kwasekuqaleni. Indoda iqala ukuphuza amanzi amaningi, imvamisa iya endlini encane, ingaba nezinkinga zesimo sobulili. Uma isisu sakho sibuhlungu ngesifo sikashukela, lokhu kungaba yi-harbinger ye-lipodystrophy, ebaluleke kakhulu futhi udinga ukuzama ukuvimba ukuqala kwayo. Futhi, yiqiniso, isiginali yosizi izonikeza isikhumba.
Izimpawu zesifo sikashukela emadodeni
Kaningi, amadoda asemsebenzini, noma, ngokwesibonelo, lapho elungisa umshini, angalimala noma aqale kancane. Ukuqala kuzophola isikhathi eside. Lezi yizimpawu ezibonisa isifo sikashukela emadodeni (bheka isithombe 6). Ngaphezu kwalokho, emadodeni, ukuvuvukala kwejwabu le-penis kungenzeka, ngoba ukuchama kwenzeka kaningi kakhulu kunokujwayelekile. Olunye uphawu olukhona yindlela imilenze ebukeka ngayo nesifo sikashukela.
Isifo sikashukela ezinganeni
Ngeshwa, izimpawu zesifo ziya ngokuya zibonakala ezinganeni. Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokufinyelela ebudaleni izimpawu zesifo sikashukela ezinganeni (bona isithombe 7) kungenzeka kungaveli. Abazali babaluleke kakhulu futhi akufanele baphuthelwe izimpawu zokuqala zesifo sikashukela.
Uma lokhu kungumntwana omncane kakhulu kuze kube unyaka, ngakho-ke kufanelekile ukunaka amamaki amhlophe ku-diaper, uma ingane ichazile. Umchamo wengane uba ngaphezulu kwe-viscous uma uqhathaniswa nokujwayelekile, cishe okunamathelayo. Ingane ibhala kaninginingi futhi ngobuningi bayo, iba nokuphumula, kepha ngasikhathi sinye futhi ilale. Imvamisa umntwana ulahla kuphela ngemuva kokuba umama wakhe emphuze amanzi. Ukuqunjelwa okuhambisana nesifo sikashukela (isithombe ngezansi) kunzima ukwelapha. Ama-okhilimu ajwayelekile kanye namaphawodi awasizi ukubelapha.
Imiphumela ebonakalayo yokungasebenzi kahle ohlelweni lwe-endocrine yizifo zesikhumba ku-mellitus yesifo sikashukela (isithombe 8), ngenxa yokuphazamiseka komzimba emzimbeni. Kubaluleke kakhulu ukuqaphela izilonda zesikhumba ngesikhathi, ezinganeni nakubantu abadala. Isibonakaliso esibonakalayo amabala emilenzeni onesifo sikashukela i-mellitus, aqhamukayo ngenxa yokungondleki kwezicubu futhi ikakhulukazi imithambo yemilenze. Kunezimo lapho izidakamizwa ezisetshenziselwa ukwelapha ushukela zibangela i-eczema noma i-urticaria esigulini. Lezi zinzima ukwelapha izinkinga zesikhumba sezivele zithathwa njengezinkinga ezivela ekwelashweni.
Imiphumela yesifo sikashukela (isithombe 8) iyingozi kakhulu, ibeka usongo ngqo hhayi kwikhwalithi yempilo yesiguli, kodwa futhi nasempilo uqobo. Kuyaluleka ukuthi uqale ukwelapha isifo sikashukela ekuqaleni kwesikhashana. Nazi ezinye zezinkinga ezimbalwa:
i-gangrene yeminwe nezinyawo,
inqubo engalungile ye-metabolic
Izinkinga ekusebenzeni kohlelo lwezinzwa nezinso,
ukwehluleka kokusebenza kweminye imizimba,
ukushaya kwenhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Izinkinga zesifo sikashukela (isithombe ngezansi) sibucayi kangangokuba kufanelekile ukuguqula eminye yemikhuba yakho. Indlela yokuphila kumele ibe yeselula, umsoco - kwesokudla. Gwema ukuphazamiseka kwemizwa futhi uqiniseke.